Ecosphere: kedu ihe ọ bụ, njirimara, nnwale na ọtụtụ ihe ndị ọzọ | Netwọk Mgbasa Ozi
Planetwa anyi bu usoro ihe eji eme ihe nke nwere ihe di ndu na gburugburu ebe obibi ebe ha na emekorita ma biri. Echiche nke ecosphere ọ gụnyere ihe niile dị ka a ga - asị na ọ bụ ihe niile dị na mbara igwe. Anyị maara na usoro okike dị ka ụlọ nke ihe ndị dị ndụ na etiti na-enye ihe niile dị mkpa ka ha nwee ike ibi, na-eri nri ma mụta ụmụ.
N’isiokwu a anyị ga-agwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara ecosphere na njirimara ya.
1 Gịnị bụ ecosphere
2 Ihe ndi ozo na ihe ndi ozo
3 Nkọwa nke ecosphere maka ụmụaka
4 Echere na nnwale
Gịnị bụ ecosphere
Echiche nke mbara igwe bụ ihe zuru oke, ya mere ọ gụnyere ihe dị iche iche n'ozuzu ya. Ọ bụ okwu nke na-ezo aka na mbara igwe n'ụzọ ọ na-adịkarị site na mbara ụwa. Dịka ọmụmaatụ, ikuku na-emetụta mbara igwe, geosphere, hydrosphere, na biosphere. Anyị ga-agbaji akụkụ ọ bụla na ụdị njirimara ọ nwere:
Geosphere: ọ bụ mpaghara ahụ nke gụnyere akụkụ abiological dum, dịka okwute na ala. Akụkụ niile nke gburugburu ebe obibi enweghị ndụ nke ya na ihe ndị dị ndụ na-eji ya eme ihe oriri.
Mmiri: ọ gụnyere mmiri niile dị na mbara igwe. E nwere ọtụtụ mmiri ugbu a ma ọ dị mma ma ọ bụ nnu mmiri. Na hydrosphere anyị na-ahụ osimiri, ọdọ mmiri, iyi, iyi, oké osimiri na oké osimiri. Ọ bụrụ na anyị ewere atụ nke usoro ohia na mbara igwe anyị ga-ahụ na hydrosphere bụ akụkụ nke osimiri na-agafe oke ọhịa.
Ikuku: usoro okike nile nke uwa nwere ikuku nke ha. Nke ahụ bụ, ọ bụ ikuku gbara ya gburugburu ebe a na-agbanwere gas site na ọrụ nke ihe ndị dị ndụ. Osisi na eme fotoynthesis ma wepụ ikuku oxygen site na ịmịkọrọ carbon dioxide. Mgbanwe gas a na-eme na ikuku.
Ahia: enwere ike ịsị na ọ bụ oghere depụtara site na ịdị adị nke ihe dị ndụ. N'aka ozo, anyi gaghachi na ihe omuma nke usoro ohia, anyi nwere ike ikwu na biosphere bu mpaghara ndu nke ihe ndi di ndu biri. Ọ nwere ike iru site na ala ruo na mbara igwe ebe nnụnụ na-efe.
Ihe ndi ozo na ihe ndi ozo
Enwere ike kee oke okike nke gbasaa mbara igwe na otutu ihe ndi ozo di nfe karie ihe omumu ma nwee otutu ihe omuma nke onwe ha. Ọ bụ ezie na ha niile bụ akụkụ nke ngalaba ndị dị elu a na-akpọ biomes, enwere ike kewaa usoro okike na otu. Nke ahụ bụ, usoro okike ya n'onwe ya nwere ihe niile achọrọ iji nwee ike ịnabata ndụ yana na enwere mmekọrịta n'etiti ihe dị ndụ na gburugburu ebe obibi. A biome bụ otu usoro ihe omumu nke mejuputara ihe ndi yiri ya na nke nwere ike ibu mmiri na ala.
Ka anyị were ihe atụ nke ọtụtụ ihe ndị dị ndụ: dịka ọmụmaatụ anyị nwere ike ịchọta ala mmiri, ala mmiri, oke ọhịa, mpempe akwụkwọ, oke osimiri dị elu, wdg. Ọ bụrụ na anyị na-ekwu maka usoro okike anyị nwere ike ikwu maka otu akụkụ, ọhịa, wdg. Agbanyeghị, biomes bụ usoro nke usoro okike ndị a ebe ụdị ụdị ahụ nwere ike ibi.
Ugbu a bụ mgbe anyị ga-ewebata mmadụ n'ime usoron. Mụ mmadụ na-ekewa ma kewaa usoro okike iji ghọta ha nke ọma. I nwekwara ike na-erigbu ma chebe ha na uche gị. Otu ihe doro anya, okike bụ ihe zuru ezu ma enwere mmekọrịta a na-apụghị izere ezere, na-agbanwe agbanwe mgbe niile n'etiti ihe dị ndụ na gburugburu ebe obibi nke mejupụtara mbara igwe.
Nkọwa nke ecosphere maka ụmụaka
Na ụzọ dị mfe karị, anyị ga-akọwa ecosphere. Enwere ike iwere ya dị ka a ga-asị na ọ bụ usoro okike zuru ụwa ọnụ nke ihe niile dị ndụ nwere njikọta onwe ha na ụzọ ma ọ bụ n'ụzọ na-enweghị isi. Ka anyị were ihe atụ nke ụmụ irighiri ihe ndị na-eme foto. Ngwurugwu ndi a nwere oru hapuru ikuku oxygen n’ime ikuku ma o gha enyere ndi ozo di ndu aka inye onwe ha nri. Usoro omumu mmiri bu kwa akuku nke mbara igwe nke odi nkpa na uwa dum. Ihe niile dị ndụ na-eji mmiri ebe ọ bụ na anyị chọrọ ya ka anyị nwee ike ịdị ndụ.
Usoro nke na - ebugharị mmiri n’oké osimiri na ala bụ ihe dị mkpa maka ndụ ma na - eme na ọkwa mbara ala. Nke a bụ hydrological okirikiri. Iji lekọta mbara ụwa anyị ga-elekọta mbara igwe ma lekọta onwe anyị anya.
Echere na nnwale
A makwaara ya dị ka mbara igwe na nnwale a ma ama nke NASA mere n'echiche nke imepụta ihe okike nke ga-abụ ụdị obere ụwa. Agbalịrị ime ka mmekọrịta niile dị n'etiti ihe dị ndụ na ihe ndị na-adịghị ndụ mee ka ụwa mbara ụwa pere mpe.
N'ime akwa kristal ka ebutere ihe mmiri mmiri, na oporo, algae, gorgonian, gravel na bacteria. A na-eme ihe ndị dị ndụ na ụzọ dịpụrụ adịpụ ebe ọ bụ na akpachi ahụ ejiri mechie ya. Naanị ihe ọ na-enweta site na mpụga bụ ọkụ mpụga iji nwee ike ijigide usoro ndụ ma zoo ọnụnọ anyanwụ na mbara ụwa anyị.
A hụrụ nnwale a dị ka ụwa zuru oke ebe oporo nwere ike ibi ọtụtụ afọ n'ihi afọ ojuju nke gburugburu ebe obibi. Tụkwasị na nke a, enweghị ụdị mmetọ gburugburu ebe obibi ọ dịghị mkpa ụdị nhicha ọ bụla na mmezi ya dị ntakịrị. Nke a bụ ụdị nnwale na-adọrọ mmasị iji nwee ike ịghọta nke ahụ, ogologo oge a na-akwanyere nguzozi gburugburu ebe obibi ùgwù, ihe niile nwere ike ịdị n'otu.
Anyị nwere ike ịkọwa ụfọdụ ntụnyere na ihe na - eme taa iji ghọta ma mata mkpa ọ dị ịme ọnọdụ ụfọdụ iji nweta ma jigide usoro gburugburu ebe obibi ọzọ. Site na teknụzụ dị ugbu a, anyị nwere ike iwepụta nnukwu ike na-emetọ ihe na-eme ka usoro obibi obibi ghara ila n'iyi. Anyị na-ebibi gburugburu ebe obibi na ebe obibi nke ọtụtụ ụdị, na-eduga ha na mkpochapụ n'ọtụtụ oge.
Ọ bụ ezie na mbara ụwa anyị dị mgbagwoju anya karịa nke nnwale ahụ, usoro ndụ a na-etolitekwa n’ụzọ yiri nke ahụ. Enwere ụfọdụ ihe dị mkpa na-etinye aka ha bụ ikuku, ụwa, ìhè, mmiri na ndụ na ihe niile metụtara ibe ha. Fọdụ na-azọrọ na e kere mbara igwe site na ike nke na-eduga ma n'ọnọdụ nkwekọ ma ọgbaghara.
Enwere m olileanya na site na ozi a ị nwere ike ịmụtakwu banyere mbara igwe na njirimara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Ciencia » Gburugburu